अमिताभको फिल्म मनाङ, मुस्ताङ र काठमाडौंमा सुटिङ ! - Purwanchal Daily
अमिताभको फिल्म मनाङ, मुस्ताङ र काठमाडौंमा सुटिङ !
२३ भाद्र २०७८, बुधबार मा प्रकाशित
कोरोना भाइरस महामारीका कारण ठप्प मनोरञ्जन क्षेत्र विस्तारै चलायमान बन्दैछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको पछिल्लो निर्णयअनुसार सिनेमा हल खोल्न पाइने भएपछि उत्साहित बनेका चलचित्रकर्मीलाई अर्को खुसीको खबर छ ।
बलिउडका चर्चित अभिनेता अमिताभ बच्चन सुटिङका लागि नेपाल आउने भएका छन् । उनी बलिउडको प्रसिद्ध ब्यानर राजश्री प्रोडक्सनले निर्माण गर्ने ‘उचाइ’ फिल्मका सुटिङका लागि नेपाल आउन लागेका हुन् ।
सुरज बडजात्याको निर्देशनमा तयार हुने फिल्ममा मित्रताको कथा देखाइने छ । फिल्ममा अमिताभसँगै अनुपम खेर, बोमन इरानी, नीना गुप्ता, पंकज त्रिपाठीलगायतको अभिनय रहनेछ । अमिताभले नेपालमा ४० देखि ४५ दिन बिताउने सेड्युल रहेको नेपालको लाइन प्रोड्युसर कम्पनी थ्री व्हिलर्स फिल्म्सका सुरज आचार्यले बताए । उनकै कम्पनीले विगत तीन वर्षदेखि भारतीय फिल्म कम्पनीसँग कुराकानी अगाडि बढाएको थियो । ‘यो प्रोजेक्टका लागि तयारी थलिएको लामो समय भइसकेको छ ।
उनीहरु एकपटक आएर बुझेर फर्किसक्नु भएको छ,’ लाइन प्रोड्युसर आचार्यले भने, ‘मैले बारम्बार नेपालमा पनि विदेशको झैँ लोकेसन छ भनेर बलिउडका फिल्मकर्मीलाई भन्ने गरेको थिएँ, फिल्मको काम कोरोनाले गर्दा केही समय ढिलो भयो ।’
सुरजले राजश्री फिल्म्सले नेपालमा छायांकन सकेसंगै बलिउडबाट अन्य धेरै फिल्म छायांकनका लागि आउने संकेत गरे । ‘धेरै प्रोडक्सन हाउससँग कुराकानी भइरहेको, केवल खाँचो छ त सुरुवातको,’ उनले भने । ‘उचाइ’ फिल्मका लागि नेपालका प्रोडक्सन म्यानेजर अरुण रेग्मी हुन् । यतिबेला सुरज र अरुण हिमाली भेगमा छायांकनका लागि लोकेसन हेर्न ट्रेकिङ गाइड तिलकराम राईसँग पुगेका छन् ।
फिल्ममा डैनी डेन्जोंगपाको पनि मुख्य भूमिका रहनेछ । चारजनाको मित्रताको कथा नेपालको हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने डेनीसँग जोडिएर शुरु हुने बुझिएको छ । फिल्मको छायांकन हिमाली भेगमा हुँदा त्यसले पर्यटनमा टेवा पु¥याउने ट्रेकिङ गाइड तिलकराम राईले बताए । ‘मैले धेरै पर्यटकलाई घुमाएको छु, त्यसैले गर्दा विश्व लोभिने लोकेसन सजेस्ट गर्नेछु,’– तिलकले भने । उनले हिमाली भेगको लोकेसन सुझाइरहेका छन् ।
Previous articleचुलाचुलीमा कर्मचारी हकहित मञ्च
Next articleभाषा आयोगको सिफारिस र चुनौती